उत्पादन Achives| Page2of 86
बर्खाको पानीमा भिजेपछि सलह लट्ठिने र धेरै क्षति गर्न नसक्ने विज्ञहरुको दावी
काठमाडौँ । अफ्रिकी मुलुबाट पाकिस्तान, भारत हुँदै नेपालसम्म सहल किराको प्रकोप देखा परिसकेको छ । हावा जता बहन्छ सलह किरा पनि त्यही दिशातिर उडेर जाने भएकाले सलह आगमनमा मौसमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । सो किरा हावाको दिशा पछ्याएर …
रोपाइँ महोत्सवः सरकारले बनायो निश्चित नियम, रोपार र लाठेबीच हिलो छ्यापाछ्याप गर्न नपाइने
काठमाडौँ । यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव सञ्चालन गर्न सरकारले निश्चित नियम तयार पारेको छ । यसअघि आ–आफ्नै परम्पराअनुसार रोपाइँ महोत्सव हुने गरेका थिए । तर यसपटक विश्वमा फैलँदै गएको कोभिड-१९ का कारण रोपाइँ महोत्सव सञ्चालन गर्न निश्चित नियम बनाइएको …
नेपालमा छिरेको सलह खन्चुवा प्रवृत्तिको
काठमाडौं । शनिबार विहान देखी तराई क्षेत्रमा देखिएको सलह किरा अधिकांश तराईका जिल्लामा फैलिइसकेको छ । तराई क्षेत्रमा फैलिएको सलह पहाड चढ्न सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का वरिष्ठ बैज्ञानिक डा. सुनिल अर्याल सलह किरा अहिलेको हावाको वहावलाई हेर्दा पहाड …
सलह नेपाल भित्रियो, अनिकाल निम्त्याउनसक्ने चिन्ता बढ्यो
काठमाडौं । तराईका विभिन्न जिल्लाबाट सलह (फट्याङग्रा) भित्रिएको छ । यो किरा शनिबार बिहानै नेपाल प्रवेश गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भैरहवा, पर्सा, बारा, सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट नेपाल प्रवेश गरेको हो । कृषि मन्त्रालयको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका …
बीस प्रतिशत रोपाईं सकियो, मनसुन समयमै सक्रिय, रोपाईं राम्रो हुने सरकारको आशा
काठमाडौँ । जेठ तेस्रो सातादेखि सुरु भएको धान रोपाइँ हालसम्म २ लाख ७५ हजार २९ हेक्टरमा भएको छ । बर्खे सिजनमा करिब १३ लाख ७१ हजार हेक्टरमा रोपाइँ हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये यस वर्ष असार १० …
सरकारी संस्थानले दुग्धजन्य पदार्थको मूल्यमा दियो छुट, अब कतिमा पाइन्छ ?
काठमाडौँ । लकडाउन(बन्दाबन्दी)का कारण दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीमा कमी आउँदा मौज्दातमा वृद्धि भएकाले सरकारको स्वामित्व रहेको दुग्ध विकास संथान (डिडिसी)ले घ्यु, नौनी र धुलो दूधको मूल्य घटाएको छ । यही असार ३ गतेदेखि घ्युमा प्रतिलिटर रु २०, नौनीमा रु ८० र धुलो …
ललितपुर महानगरपालिकाका यी १० वटा हुँदैछन् कृषि पकेट क्षेत्र
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० वटा वडालाई कृषि पकेट क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्ने भएको छ । महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले बुधबार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वडा नं १८, २१, २२, २३, २४, २५, २६, …
प्रधानमन्त्री भन्छन्- ‘बेसार खाउ’, तर छैन पर्याप्त उत्पादन, भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता
काठमाडौं । नेपालीले दाल–सब्जी पकाउँदा प्रायः छाकपिच्छे प्रयोग गर्छन्, बेसार। औषधीय गुण भएको त्यही बेसारमा पनि नेपाल आत्मनिर्भर छैन। हुन त यसको आयात परिमाण सानो देखिन्छ। तर, त्यसबापत बाहिरिने नेपाली रुपियाँ भने ठूलै छ। बेसार खेतीमा आवश्यक लगानी नहुँदा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा …
लकडाउन खुकुलो भएसँगै यसरी लयमा फर्किदैछ पोल्ट्री व्यवसाय
चितवन । दुई वर्षयता उतारचढावमा रहेको पोल्ट्री व्यवसाय लकडाउन खुकुलो भएसँगै लयमा फर्किँदै छ । यसका कारण कृषकहरुले विस्तारै राहत महसुस गर्न थालेका छन् । नेपालको आत्मनिर्भर व्यवसायको रुपमा परिचित पोल्ट्री लकडाउनको शुरुआती चरणमा निकै खस्केको थियो । लकडाउन शुरुभएदेखि दुई साता अघिसम्म …
न्यू कटुवाल ग्रील उद्योगले बजारमा ल्यायो खुट्टाले चलाएर स्यानिटाइज गर्ने फलामबाट निर्मित उपकरण
काठमाडौँ । न्यु कटुवाल ग्रील उद्योगले कम मूल्यमा गुणस्तरीय एवम् लामो समयसम्म टिकाउ हुने खुट्टाले चलाएर स्यानिटाइज गर्ने फलामबाट निर्मित उपकरण बजारमा ल्याएको छ । उक्त उद्योगले देश अहिले कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्थामा कोरोनाको संक्रमणबाट बच्ने उपाए मध्येको एक हातले नछोइकन स्यानिटाइज गर्न …
स्वेदशकै फलफूल र तरकारीलाई प्राथमिकता दिएका छौँः मन्त्री भट्ट
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले किसानले उत्पादन गरेको फलफूल र तरकारीलाई नै बजारमा ल्याउन प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले विचौलियाले …